Golaha Amaanka oo Amaanay Soomaaliya - iftineducation.com
Golaha Amaanka oo Amaanay Soomaaliya
aadan21 / April 22, 2016
iftineducation.com – Golaha ammaanka ee QM ayaa madaxweyne Xasan Sheekh iyo dowladda federaalka Soomaaliya ku amaanay horumarka siyaasadeed ee Soomaaliya ay sameysay afartii sano ee tagtay.
Warbixin uu golaha soo saaray kadib kulan uu 19-kii bishan warbixin kaga dhageystay madaxweyne Xasan Sheekh, ayuu si gaar ah ugu bogaadiyey heshiiska laga gaaray nooca doorashada Soomaaliya ee 2016-ka, taasi oo goluhu sheegay inay u gogol xaari doonto doorasho qof iyo cod ah oo Soomaaliya ka dhacda 2020-ka
Golaha Ammaanka ayaa ayaa ugu baaqay baarlamanka Soomaaliya inay sida ugu dhaqsiyaha badan u ansixiyaan heshiika ay gaareen Madasha Wadatashiga Qaran.
Xubnaha Golaha Ammaanka ayaa dib ugu celiyey inay filayaan in wax waqti kordhin ah aan loo sameyn hay’adda dowladda Soomaaliya ee iminka jira.
Waxa uu goluhu walaac ka muuiyey xaaladda amni ee Soomaaliya oo uu ku qeexay mid aad u jilicsan.
Xubnaha golaha ammaanka ayaa qoraalkooda ku cambaareeyey weerarada Al-Shabaab iyo qorashada kooxdaas ee caruurta, ayaga oo ku ammaanay ciidamada Amisom iyo kuwa qaranka Soomaaliyeed inay yareeyeen halista kooxdan.
Xubnaha Golaha Ammaanka ayaa hoosta ka xariiqay muhiimaadda in lasii wado weerarada Amisom iyo ciidamada dowladda Soomaaliya ee ka dhanka ah Al-Shabaab, ayada oo la waafajinayo xeerka caalamiga ah ee dhowrista shacabka iyo xuquuqda aadanaha.
Shacabka degan deegaanada uu maro Webiga Shabelle oo ku farxay soo laabashada biyaha Webiga (SAWIRRO)..
NISA oo Qabatay Baabuur Iyo Dabley